Electric Water Pumps, okubhukuda Pump, Dc Pool Pump - Jade
Gxila ehlambulula pool yakho bese ukuphila kwakho
Kusukela ngo-1986, China ehola nomkhiqizi motor. Jade athuthukile swimming pool futha nge motor nobuchwepheshe bayo oluseqophelweni unqobile idumela elihle emhlabeni wonke ngo yamuva iminyaka 5.
ETL, CETL, CE, RoHS, izitifiketi CEC njll Zonke izingxenye zamukele izinto oqeqeshiwe. 100% izinga isheke nokuhlolwa eliqinile wonke umkhiqizo ingakafiki imithwalo.
ukukhiqizwa ngezinga elikhulu futhi abasebenzi abaqeqeshwe kahle ukunciphisa izindleko kakhulu, Jade imikhiqizo umncane ezindaweni amanani abiza kakhulu ube umdayisi yokuncintisana kakhulu esifundeni sakho.
Dlala Isikhathi Ukuhola
ukuklama imishini ekwazi ukuzilawula eziningana ezinkulu eqondile ukusiza ukuba aphuthume oda ngesikhathi esifushane. Singaba imiyalo yakho esiphuthumayo sesilungile 1 nje ngesonto.
imikhiqizo yobungoti yazo design kuholela kalula ukufakwa kanye nokugcinwa, ezisiza ekunciphiseni ukubuyiselwa kubangelwa nzima ukusebenza.
Ukuthengiswa okuphezulu nge amakhono athile wenze ukuba uzizwe nzima ukuxhumana embonini, bonke abasebenzi Jade uyokuma nguwe, uphendule uphenyo lwakho futhi ukuxazulula inkinga yakho, kungakhathaliseki pre-yokuthengisa noma ngemva-yokuthengisa.
20 "(500mm) Sand Hlunga futhi Pump System
Okuzenzakalelayo Pool Cover Pump
Jade IMIKHIQIZO Showroom
Bathi Qaphu Amakhasimende ethu
Ngaqale ngabheka Jade njengoba wabahlinzeki bethu okunye kule minyaka embalwa edlule nendawo kuphela oda Isivivinyo encane. Kubonakala imikhiqizo yabo zinhle ngokwanele ukwanelisa amakhasimende ethu, ngibona uyabuya kancane kumakhasimende ethu. Abaningi ...
Howard Clancy, A distributor e-Australia
Jade ihlangabezana nezidingo zethu ngokuphelele. Bayakwazi usinikeze imibala egcizelele futhi ukubukeka for amaphampu nokuhlunga nakuba singazi ukuthenga kakhulu ukuze ngamunye. Mina nomuzwa wokuthi bayangazisa yilo inkampani ezintsha.
mkhulu ukusebenza Jade, ngiyaya umxhwele ngokukhethekile kakhulu ngemva-ukudayiswa inkonzo yabo! Sibe nenkinga e afanayo izinjini zabo zokuqala izinhlangothi amakhasimende ethu 'ezimanzi wacela usizo. Sasingazi ngicabanga ukuthi ...
Liberato Guzman A distributor e-USA
Thola Jade e Canton Fair 2014
Sishayele manje: +86 574 28525988